शिवमायाका सामु नेकपा सचिवालय निरीह | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← तमु समाज युएईले तमु च्यु ल्होसार भव्यरुपमा सम्पन्न (फोटो फिचरसहित)
आउदो जनवरी ३० तारिक मोरङसुनसरी सेवा समाज कुवेतको चौथो वार्षिको उत्सव तथा वृहत बनभोज कार्यक्रम →
Posted on 13/01/2020 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
पूर्वमाओवादी नेता भन्छन्- शिवमायाको सम्भावना सकियो
२ ७ पुस, काठमाडौं । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले ठीक गरिरहेकी छिन् या बेठीक ? यसको हिसाब-किताब राजनीतिशास्त्र र कानूनका विद्यार्थी वा नेकपाका नेता/कार्यकर्ताले गर्लान् । तर शिवमायाले नेकपाका शीर्षनेताहरुलाई हाराबारा खेलाएको चाहिँ पक्कै हो । शिवमायाका अगाडि नेकपा सचिवालय लाचार बन्न पुगेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसेको थियो, जसले उपसभामुख डा. तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गर्न लगाउने सर्वसम्मत निर्णय गर्‍यो ।
तर नेकपाबाटै सांसद र उपसभामुख बनेकी शिवमायाले आफू सार्वभौम संसदको उपसभामुख भएको र पार्टीको ह्वीप नमान्ने सन्देश नेकपा सचिवालयलाई दिएकी छिन् । शिवमायाको अडानले हैरान बनेका नेकपा नेताहरुले आइतबार बिहान उनलाई बालुवाटारमा बोलाए ।
यसैवीच, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले सभामुख र उपसभामुख प्रकरण सहज ढंगबाट टुंगिने दाबी गरेका छन् । यस’bout नेकपामा देखिएको विवादले विरोधीहरुको ‘जिब्रो रसाएको’ महासचिव पौडेलको आरोप छ ।
साथै उनले पार्टीको अनुशासन र निर्णय नमानेका कारण अब शिवमायालाई सभामुख बनाउने सम्भावना समाप्त भएको दाबी गरे ।(अन्लाईनखबर )